Indlela yokuvala iTelegram? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Epreli 28, 2021 0 IiCententarios 286
Ukuvala iseshoni kwiTelegram yenye yezona zinto zilula esivumela ukuba senze isicelo, kodwa ukuba awuyazi indlela yokuphelisa enye yeeseshoni zakho ezivulekileyo, ungakhathazeki. Apha siza kuchaza yonke into oyifunayo malunga nokuvala iTelegram kwimizuzwana embalwa.
Ukuba kukho into iTelegram inayo, kukuba ikuvumela ukuba uvule iiseshoni ezininzi ngaxeshanye, Oko kukuthi, ungaqhagamshelwa kwiselfowuni kwaye kwangaxeshanye ungene kwiakhawunti yakho kwikhompyuter, umzekelo. Ukuba ufuna ukubona kwaye uvale zonke iiseshoni zakho kuya kufuneka ulandele amanyathelo athile.
Funda ukubona iiseshoni zakho ezivulekileyo
Ukufunda ukubona iiseshoni ezivulekileyo zeTelegram kubaluleke kakhulu kuba iya kusinceda ukuba sikhuseleke ngakumbi kwaye sazi ukuba masenze ntoni xa umntu othile ezama ukungena kwiakhawunti yethu.
Kungenzeka ukuba singene kwikhompyuter yoluntu okanye nakweyiphi na ifowuni yomhlobo okanye ilungu losapho, Ngaba ucinga ukuba awuphumanga? Kukho indlela elula yokufumanisa.
Into yokuqala ekufuneka uyenzile ukuvula usetyenziso, nokuba kukwiselfowuni yakho okanye ngokuthe ngqo kuguqulelo lwe desktop. Yiya kwimigca emithathu ethe tye ebonakala kwicala lasekhohlo kwicala lesikrini kwaye ucofe apho.
Kuya kufuneka khetha ukhetho "Useto" kwaye ukhethe "Ubumfihlo nokhuseleko" ukufikelela kwicandelo leeseshoni ezivulekileyo. Ukwazi ukuba zeziphi iiseshoni ezingavaliyo, kufuneka ucofe nje kwi "Iseshoni esebenzayo" ukhetho.
Kulula kwaye kuyakhawuleza Unokufumana ukuba zeziphi iiseshoni zeTelegram ezivulekileyo kwaye uqhubeke nokuzivalela ukhuseleko olukhulu.
Uzivala njani iiseshoni zeTelegram
Ngaba ukufumanise kulula ukufumana iiseshoni ozivulekileyo kwiTelegram? Kuya kuba lula ukuvala nganye yazo. Ukwenza olu hlobo lwenkqubo, konke okufuneka ukwenze kukulandela amanyathelo nje ambalwa alula esiza kuwachaza kwangoko.
Vula isicelo yocingo
Cofa kwimigca emithathu ethe tye ezibonakala phezulu ngasekhohlo kwesikrini
Vumela "Ubumfihlo nokhuseleko"
Cofa kwindawo okhetha kuyo "Iiseshini ezisebenzayo"
Okokugqibela kuya kufuneka ucofe ku "Vala zonke ezinye iiseshoni":
Elula njengaleyo Uya kuba uvale iseshoni nganye yeTelegram ozigcine zivulekile kwezinye izixhobo. Ngoku akekho omnye umntu onokufikelela kwiakhawunti yakho kwaye ebe ulwazi lwakho.
Ngaba ndingayenza kwikhompyuter?
Inkqubo yokuvala iseshoni yeTelegram inokwenziwa nakwesiphi na isixhobo oyithandayo, oko kukuthi, ungayenza kwiselfowuni okanye kwithebhulethi okanye ikhompyuter. Inkqubo iyafana ngokufanayo.
Kuya kufuneka kuphela fikelela kwisicelo kwisixhobo osithandayo kwaye uye kwicandelo leseto lesicelo. Apho yiya ngqo kubucala nakukhetho lokhuseleko, emva koko uya kucofa "kwiiseshoni ezisebenzayo" ukufikelela kwiiseshoni ezingavalwanga. Ekugqibeleni nqakraza "Vala zonke ezinye iiseshoni"
1 Funda ukubona iiseshoni zakho ezivulekileyo
2 Uzivala njani iiseshoni zeTelegram
3 Ngaba ndingayenza kwikhompyuter?